Xallinta khatarta Safari - Xawaaridaha Xawaaraha ah
Disabling DNS Prefetching waxay hagaajin kartaa Performance of Safari
Safari, oo ay wehliyaan oo kaliya oo ku saabsan browser kasta oo kale, hadda waxaa ka mid ah horgalinta DNS, muuqaal loogu talagalay in lagu sameeyo farsamaynta webka khibrad degdeg ah adoo eegaya dhamaan xiriirada ku dhex jira bogga internetka iyo weydiinta server-kaaga DNS si loo xalliyo khadka Cinwaanka IP.
Marka hor-marinta DNS-ka ay si fiican u shaqeyneyso, marka aad gujiso bogga internet-ka, barta internet-kaaga ayaa ogaanaya cinwaanka IP-ga oo diyaar u ah inuu ku dhajiyo bogga la codsaday. Tani macnaheedu waa wakhtiyo aad u dhaqsaha badan marka aad ka guurto bogga ilaa bogga.
Marka, sidee ayay taasi u noqon kartaa wax xun? Waa hagaag, waxaa soo baxday in horey wax u qabashada DNS ay yeelan karaan qaar ka mid ah dhibco xiiso leh, inkastoo keliya xaaladaha gaarka ah. Inkastoo daaliyeyaashu intooda badan ay leeyihiin hordhac DNS ah, waxaan dooneynaa in aan xoogga saarno Safari , maadaama ay tahay shabakadda ugu horeysa ee Mac.
Marka safari websaytka, mararka qaarkood bogga waa la soo baxaa oo u muuqda inuu diyaar u yahay inaad u fiirsato waxyaabaha ay ka kooban tahay. Laakiin markaad isku daydo inaad kor u qaaddo ama hoos u soo dhigto bogga, ama aad u dhaqaaqdo tilmaamaha mashiinka, waxaad heleysaa curiyaha wareega. Waxaa laga yaabaa inaad aragto in naqshadeynta naqshadeenta casriga ah ay weli wiiqayso. Dhamaan kuwan waxay muujinayaan in inta bogga si guul leh loo soo bandhigay, wax ayaa ka hortagaya graaca inuu ka jawaabo baahiyahaaga.
Waxaa jira tiro fara badan oo suurtagal ah. Bogga wuxuu khaladka ku yeelan karaa, server-ka goobta wuxuu noqon karaa mid gaaban, ama qayb ka baxsan qaybta bogga, sida adeega adeegga adreeska sadexaad, waxaa dhici karta inuu hoos u dhaco. Noocyada noocaan ah badiyaa waa ku meel gaar ah, waxaana laga yaabaa inay tagaan waqti gaaban, min daqiiqo illaa dhowr maalmood.
Arrimaha hor-u-marinta DNS waxay u shaqeeyaan wax yar. Waxay badanaaba saameyn ku yeeshaan shabakada isla mar kasta oo aad booqatid markii ugu horeysay safarka browser Safari. Waxaad booqan kartaa goobta subixii hore iyo inaad ogaato in ay aad u gaabisantahay in laga jawaabo. Dib u soo celi saacad ka dib, dhamaantiisuna waa fiican. Maalinta ku xigta, qaabka isku mid ayaa soo noqnoqonaya. Booqashadaada ugu horreysa waa mid gaabis ah, runtii si tartiib ah wixii booqashooyin xiga ee maalintaas ah waa kuwo ganaax ah.
Sidaa awgeed, Maxay Tahay Inaad Ku Qaadato DNS Prefetching?
Tusaalaheena kor ku xusan, marka aad tagto shabakadda ugu horeysa ee subaxdii, Safari waxay qaadataa fursad ay ku soo diri karto su'aalaha DNS ee xiriir kasta oo ay ku aragto bogga. Iyada oo ku xiran bogga aad kuxirantahay, waxay noqon kartaa dhawr su'aalood ama waxay noqon kartaa kumanaan, gaar ahaan haddii ay tahay website ku jira fariimo badan oo user ah ama aad booqanayso nooc ka mid ah noocyada.
Dhibaatadu maaha mid aad u badan oo Safari u dirayo taariiqda DNS ah, laakiin in qaar ka mid ah hababka dukaamada guryaha waayeelka ah aysan awoodi karin inay xakameeyaan codsiyada, ama in nidaamka DNS ee ISP uu hoos u dhigo codsiyada, ama labadaba.
Waxaa jira laba hab oo sahlan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka iyo xalinta dhibaatooyinka waxqabadka DNS. Waxaanu dooneynaa in aan kuugu qaadno hababka labada.
Badal bixiyahaaga Adeegga DNS
Habka ugu horreeya waa inaad bedesho bixiyaha adeegga DNS. Dad badan ayaa isticmaala nidaam kasta oo DNS ah oo ay ISP u sheegto inay isticmaalaan, laakiin guud ahaan, waxaad isticmaali kartaa adeeg kasta oo adeegga DNS ah ee aad rabto. Marka aan waayo-aragnimadayda ah, Adeegga DNS-ka ee ISP ayaa ah mid aad u xun. Beddelidda bixiyeyaasha adeegga ayaa ahaa tallaabo wanaagsan oo ku saabsan qaybteena; waxaa laga yaabaa in ay kuu wanaagsan tahay sidoo kale.
Waxaad tijaabin kartaa bixiyahaaga hadda ee DNS adoo isticmaalaya tilmaamaha ku jira tusahan soo socda:
My Browser Ma Tusi Barta Internetka si sax ah: Sidee ayaan u Dhigaa Dhibaatadan?
Haddii ka dib markaad hubiso adeegaaga DNS, waxaad go'aansataa inaad bedesho mid kale, su'aasha muuqata waa, midkee? Waxaad isku dayi kartaa OpenDNS ama Google Public DNS, laba shirkadood oo caan ah oo bilaash ah adeeg bixiyeyaasha DNS, laakiin haddii aadan ku fikirin inaad wax yar qabatid, waxaad isticmaali kartaa tusahan soo socda si aad u tijaabiso bixiyeyaasha adeegyada kala duwan ee DNS si aad u aragto midka kuu fiican:
Ku tijaabi Bixiyahaaga DNS si aad uhesho bogga Helitaanka Baaskiilka
Marka aad dooratid bixiye DNS ah si aad u isticmaasho, waxaad ka heli kartaa tilmaamo ku saabsan bedelida goobaha Macmooyinka Macmalka Macluumaadkan soo socda:
Maamul Macluumaadkaaga Macmiilka
Markaad bedesho shirkad kale oo DNS, ka tag Safari. Safar Safari kadibna iskuday boggaaga oo sababaya dhibaatooyin soo noqnoqday.
Haddii goobta boggeeda hadda ay tahay mid hadda ku habboon, Safari way noqotaa mid wax jawaab ah, markaa waa inaad dhammaantiin; dhibaatadu waxay ahayd bixiyaha DNS. Si aad u hubiso laba jeer, isku day in aad bogga isku marisid kadib markaad xirto oo aad dib u bilowdo Mac. Haddii wax walbaa ay shaqeynayaan, waxaad sameysay.
Haddii kale, dhibaatadu waxay u egtahay meel kale. Waxaad dib ugu noqon kartaa goobahaaga hore ee DNS, ama kaliya ka tagto kuwa cusub, meelkale, haddii aad bedeshay mid ka mid ah bixiyeyaasha DNS ee aan soo jeediyey; labaduba aad ayey u shaqeeyaan.
Dami Sacare & Dareebka DNS Prefetch
Haddii aad weli dhibaato ku qabtid, waxaad xallin kartaa iyaga oo aan weligood booqanin website-ka mar kale, ama adoo diidaya inaad horey u dhigatid DNS.
Way fiicnaan lahayd haddii horeyba loo dejin lahaa goobaha laga rabo Safari. Waxay noqon kartaa xitaa haddii aad awoodi karto inaad horey u sii marineyso goob-ku-saleysan. Laakiin maaddaama ikhtiyaarradani hadda la heli karo, waa inaan isticmaalnaa qaab kale si aan u jebino muuqaalka.
Hordhac Terminal, oo ku yaala / Codsiyada / Dhaqaalaha.
Daaqada Terminalka ee furan, gali ama nuqul / dhejin amarka soo socda:
qori qoraa com.apple.safari WebKitDNSPrefetchingEnabled -boolean been
Daabacaan ama soo noqo.
Markaa waxaad joojin kartaa Terminal-ka.
Ka tag oo dib u soo noqo Safari, ka dibna dib u eeg boggaaga oo dhibaatooyin kuu keenaya. Waa inay shaqeeyaan hadda. Dhibaatadaasi waxay u badantahay in routerka hore ee shabakada gurigaaga. Haddii aad beddesho router maalin, ama haddii shirkadda router bixisaa hagaajin qalab ah oo xalliya arrinta, waxaad u baahan doontaa inaad horey u rogto DNS horey u soo celinta. Halkan waa sida.
Daaqada Jidka Daabacan, gali amarada soo socda:
ereyada qoraa com.apple.safari WebKitDNSPrefetchingEnabled
Taasi waa; waa inaad dhammaanteed noqotaa. Dhanka dheer, badanaa waad ka fiicnaan laheyd mashruuca horay u-dejinta ee DNS. Laakiin haddii aad si joogta ah u booqatid website-ka wax ka qabta, is-beddelka Diiwaan-gelinta DNS, waxay maalin kasta booqasho ku noqon kartaa mid xiiso leh.
Sida loo Xaqiijiyo Mac Macbuuka ku Istaagsan on Gray Screen at Startup
Fix SPOD - Sida loo Xaqiijiyo Dhinaca Maskaxda ee Dhimashada
Sideen Bixin Karaa Dareenkayga Dardaaran haddii Macalinkayga uusan bilaabi doonin?
Sida loo Xaqiijiyo Su'aalaha La Socda ee Mac
Ma u baahan tahay inaad xakameyso Mac Hard Hard Drive?
Monster.com: Sida loo raadsado Shaqooyinka si waxtar leh
Control Email Isticmaal Mac OS X Xakamaynta Waalidka
IPad-kayga ma isticmaali karaa xogta macluumaadka iPhone?
Macaamiisha Datagram Protocol
Taageerada Zyxel (Darawaliinta, Qoraalada, Telefoonka, Email, & Ka Badan)
Apple-IBM Deal, La fududeeyay
Barnaamijka Muhiimka ah ee Windows Software ee loogu talagalay Raspberry Pi Milkiilayaasha
Sawirada Photoshop CS6
10 Hoyga Google Hangouts Easter Eggs
Sida Loo Beddelo Sawirrada Isticmaalka Linux
Qalabka lagu daro Forum si aad Blog
9ka darawaliinta SATA ee ugu Wanaagsan ee lagu iibsado sannadka 2018
Sida loo qariyo fariimaha la tirtiray ee IMAP Account
Maxay ahayd MobileMe Mail iyo Mac.com POP Settings?
IPad-ka Great Pranks si uu ugu soo jiido saaxiibbo
Canon Pixma iP110 Mobile-ka Sawir-gacmeedka Inkjet
Waa maxay App Store?
Waa Maxay Xuddunta?
Waa maxay mashiinka raadinta ugu caansan?
Qeexidda, Asalka, iyo Ujeedada Qoraalka 'Blog'